अमेरिका चीनको बिरूद्ध अर्को शित युद्ध सुरु गर्न सक्षम छ? – BANKE POST
बितेको तीन बर्षमा अमेरिकी दृष्टिकोण चीनको प्रति एकदमै तल झर्दै गएको छ। अधिकांश चिनियाँ विद्वानहरु ले अमेरिकी नीच दृष्टिकोण पहिले नै महसुस गरेका छन् । एक सर्वेक्षणको नतीजाका अनुसार ६५ प्रतिशत चिनियाँ विद्वानहरुका अनुसार अमेरिकाले चीनको बिरूद्ध नयाँ शीतयुद्ध सुरु गरेको छ, जबकि ३५ प्रतिशतले मात्र यसमा असहमत छन्। केही विद्वानहरुका अनुसार चीन र अमेरिकाको बिचको अवस्था “शान्त युद्ध” भन्दा बढी छ। धेरै विद्वानहरु चीन लाई यसको भ्रम त्याग्न, वास्तविकताको सामना गर्दै यी चुनौतीहरु लाई सामना गर्न आह्वान गर्दछन्।
चिनियाँ एकेडेमी अफ सोशल अमेरिकन इस्टिट्युट अफ अमेरिकन स्टडीजका अनुसन्धानकर्ता लियु वेडोंगले भनेका अनुसार चिनियाँ विद्वानहरुका विचारमा चीन-अमेरिका सम्बन्ध कहिले पनि राम्रो वा नराम्रो हुन सक्दैन। त्यहाँ एउटा विचार पनि रहेको छ कि चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध “चट्टान” बाट झर्दैछ।
चीनको प्रति अमेरिकी नीतिलाई विद्वानहरुका अनुसार अमेरिकाले “टकराव” र “कन्टेन्टमेन्ट” को नीति अवलम्बन गरेको बताउँछन् । वर्तमानमा चिनियाँ विद्वानहरुका अनुसार अमेरिकी राजनैतिक सर्कल चीनमा कडा हुनको लागि घरेलु सहमतिमा पुगेका छन् ।
चीनले अमेरिकाको बारेमा तीन मुख्य कारणका लागि आफ्नो भ्रम त्याग्नु पर्छ। पहिलो, हाल अमेरिकाको राजनीतिक सर्कलले चीनलाई न्याय गर्दैन। दोस्रो, चीनप्रतिको अमेरिकी नीति कडा र हस्तक्षेपपूर्ण छ। विगतमा अमेरिकाले जहिले पनि चीनले गरेको सम्झौता मा प्रतिक्रिया दिन इच्छुक थियो । तर ट्रम्प प्रशासनले उक्त अधिवेशन भङ्ग गरेको छ र यदि चीनले सम्झौता फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो भने त्यसले चीनमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउँछ। तेस्रो, अमेरिका चीनलाई दबाउन “हार-हार” स्थिति स्वीकार्न इच्छुक देखिन्छ।
“शीतयुद्ध” अमेरिका र सोभियत संघको दुई मोर्चाको बिरूद्ध टकरावलाई संकेत गर्ने विशिष्ट शब्द हो। तर अब अमेरिका एकतर्फी रुपमा चीन विरोधी मोर्चालाई संगठित गर्न खोजिरहेको छ, जबकि चीनमा अमेरिका विरोधी मोर्चा नै छैन।
छोटकरीमा भन्नुपर्दा चीन भूतपूर्व सोवियत संघ होइन । पूँजीवाद र समाजवाद बीच ठूलो वैचारिक टकराव रहेको विश्वव्यापी वातावरण अब अवस्थित छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामान्यतया शान्ति र विकासको लागि उत्सुक हुन्छ। त्यसोभए, यदि अमेरिकाले वास्तवमै चीनको बिरूद्ध नयाँ शीतयुद्ध सुरू गर्न चाहन्छ भने के चीन र अमेरिका, अमेरिका र सोभियत संघ बीच भएको शीतयुद्ध जस्तै होला ?
भूमण्डलीकरणको सन्दर्भमा देशहरूको रुचि एक अर्कासँग गाँसिएको हुन्छ। विश्वका अधिकांश देशहरू चीन र अमेरिका बीचको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन चाहँदैनन्। द्विपक्षीय तहमा अमेरिका र सोभियत संघ पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो। तुलनात्मक हिसाबले चीन र अमेरिकाको चासो व्यापार, वित्त, शिक्षा, आतंकवादको बिरूद्ध र विश्वव्यापी सार्वजनिक सुरक्षाको आधारभूत तहमा जोडिएको छ।
दुबै पक्षको इच्छुकताको परिप्रेक्षमा चीनको शीत युद्दमा आफूलाई संलग्न गर्ने कुनै इरादा छैन। अमेरिकामा हालका प्रमुख समस्याहरू जातीय द्वन्द्व, सम्पन्नताको खाका, बुढेसकाल, वित्तीय संकट र औद्योगिक खोक्रोपन आदि हो।
सर्वप्रथम चीन र अमेरिकाले आफ्ना सबै सम्बन्ध बिच्छेद गर्न सक्दैनन्। विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यापार साझेदारको रूपमा, चीन र अमेरिकाले एक अर्कामा चासो राखेका छन। चिनियाँ बजारमा ठूला अमेरिकी कम्पनीहरूको नाफा पनि अमेरिकी बजारमा भन्दा बढी छ। तसर्थ नयाँ शीतयुद्ध ले कूनै एक देशको मात्र पराजय नभई दुवै देशको नोक्सानी हुनेछ।लेखक – शिब राज कार्कि